Manel Loureiro: ndiani iye uye ndeapi mabhuku akanyorwa nemunyori uyu | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo chinyorwa Manel Loureiro: Libertaddigital
Zita raManel Loureiro zvirokwazvo rinonzwika kuva rakajairika kwauri nekuti iwe wakarinzwa. Kana iwe uri muverengi anofarira, iwe unogona kunge wakaverenga zvimwe zvacho. Kana zvisiri, uye uri wenguva dzose paterevhizheni, redhiyo kana mupepeti, unogona kunge wakazviona. Uye ndezvekuti munyori, mutori wenhau uye gweta anoziva nzira yekuita chinyoreso (uye muromo) basa rake.
Asi, Manel Loureiro ndiani? Ndeapi mabhuku awakanyora? Kana iwe uchifarira kusangana nemunyori uyu, saka tinokuratidza zvese zvatinoziva nezvake.
1 Manel Loureiro ndiani
2 Ndeapi mabhuku akanyorwa naManel Loureiro
2.2 Mazuva erima
2.3 Mutambo weZigaro: bhuku rakapinza sesimbi yeValyrian
2.4 Hasha dzevakarurama
2.5 Mutakuri wekupedzisira
2.7 Makumi maviri
2.8 Musuwo, unonakidza kwazvo Manel Loureiro
Manel Loureiro ndiani
Manel Loureiro akaberekerwa muPontevedra muna Zvita 30, 1975. Akapedza kudzidza muMutemo kubva kuYunivhesiti yeSantiago de Compostela, saka igweta. Nekudaro, mukati memazuva ake evadzidzi aive nemukana wekutaura mabasa ane chekuita neterevhizheni. Pakutanga akazviita semutambi, asi gare gare akabata zvinyorwa uye ndipo paakaziva kuti kuda kwake kwechokwadi kwaive kusiri mutemo, kana utapi venhau kana terevhizheni, asi kunyora.
Ehe, hazvibvise izvo ramba uchibatsirana munhau. Uye ndezvekuti, kunyangwe anga ari mutepfenyuri paGalicia Television, iye zvino anoshanda mumapepanhau akadai seLa voz de Galicia, bepanhau reABC, El Mundo, magazini yeGQ asiwo pawairesi, kunyanya muCadena Ser naOnda Cero. Iwe wakatokwanisa kumuona paterevhizheni, kunyanya muchirongwa Cuarto Milenio, muCuatro, uko kwave kune chikamu che periodic kubvira 2016.
Nhoroondo yake yekutanga yakauya kuburikidza nebhurogu. Uye ndezvekuti akazvipira kunyora mabhuku munguva yake uye, ndiko kwakave kubudirira kweichi, nevadzidzi vanopfuura miriyoni nehafu online, zvakakonzera kuti, paakazvipedza, zvakaburitswa. Uye hazvina kuodza moyo futi; Munguva pfupi yaive yekutengesa zvakanyanya, izvo zvakaita kuti vaparidzi vazhinji vateerere kumunyori uyu aibuda uye aikwezva kutarisisa, kwete chete pakati peveruzhinji veSpanish, asiwo nepasi rese. Ndokusaka, mushure mebhuku rekutanga iro, Apocalypse Z, mamwe akati wandei akati wandei mumakore akati wandei akabuda (muna2011 chete akaburitsa mabhuku maviri).
Sechido chekuziva, isu tinokuudza iwe kuti kubva pane yake yekutanga novel pane paine kana bhodhi mutambo. Izvi zvakapihwa mari kuburikidza nechaunga chemari pakaiswa nyaya.
Manel Loureiro anogona kudada nekuti ndiye mumwe wevanyori vashoma veSpanish avo vakakwanisa kuve pachinyorwa chemabhuku anotengesa zvakanyanya muUnited States, chimwe chinhu chisiri nyore kuwana.
Ndeapi mabhuku akanyorwa naManel Loureiro
El Bhuku rekutanga rakaburitswa naManel Loureiro raiva Apocalypse Z, muna 2007, neDolmen imba yekutsikisa (kunyangwe makore matatu gare gare yakapihwa zvekare neimwe imba yekutsikisa, Plaza & Janés). Kubva panguva iyoyo, uye achiona kubudirira kwaaive nako, akatanga kupa nguva yakawanda yekunyora, uye nekufamba kwemakore mamwe mabhuku akanyorwa naye anga achiuya. Tinozviongorora.
Iko hakuna Internet. Hapana terevhizheni. Kana nhare.
Hapasisina kana chinhu chekukuyeuchidza kuti uri munhu wenyama.
Ikozvino kwangosara nechinangwa chimwe chete: KUPONA.
Saka ndipo panotanga nyaya apo hutachiona hwapararira husingadzoreke pasi rese uye hwauraya munhu wese anenge abatwa nahwo. Dambudziko nderekuti, mushure memaawa mashoma, murume uya akafa anodzoka kuupenyu uye anozviita nenzira ine hukasha zvakanyanya.
MuSpain, gweta diki riri mukutarisira kuchengeta diary maanonyora pasi zvese zvakatarwa izvo, muzuva rake rese, zvaanoona. Kusvikira vapaza imba yake uye iye anofanira kutizira kuGalicia, chete ikozvino ine rimwe zita: Apocalypse Z.
Vakapona veApocalypse Z vanokwanisa kusvika kuCanary Islands, imwe yenzvimbo dzekupedzisira dzakachengeteka kubva kuUndead. Asi chavanoona ipapo iuto remauto rakabatanidzwa muhondo yevagari vemo, ine huwandu hwevanhu vari kuziya nenzara uye hapana kana zviwanikwa zvekurarama.
Ndiyo chikamu chechipiri chenyaya yake yekutanga, maanonunura hunhu hukuru hwenhoroondo yake, izvo zvakaita kuti Manel Loureiro abudirire, uyezve zvinomuisa mudambudziko kuedza kuponesa hupenyu hwake kubva kune asina kufa.
Mutambo weZigaro: bhuku rakapinza sesimbi yeValyrian
Iri bhuku rakanga risina kunyorwa zvakazara naiye, aingova munyori-pamwe uye, sekutaurwa kwazvinoitwa nezita, raitaura nezve Mutambo Wechigaro akateedzana uye nemhedzisiro yaive nhevedzano.
Vakapona ve zombie apocalypse vane mukana: ivo vakanunurwa pakati pegungwa nerimwe remapoka akarongeka akarara pasi pano. Vakamanikidzwa kuenda nevanunuri vavo, vanosvika kuGulf yeMexico, nzvimbo inoita kunge ichibudirira pasi pemutemo wakanaka wemuparidzi asinganzwisisike.
Icho chiri pamusororekupedzisira bhuku raZvakazarurwa Z, uko munyori anoisa mumatambudziko zvakare boka revanopona vachiedza kurarama munyika iri kuwedzera kuita chisimba. Kunyangwe hazvo munhu asina kudzidza uye achiri kuda chinzvimbo, anoreva nhema uye anonyengera, saka protagonist nevamwe vake vachatofanira kuyedza kukunda zvipingamupinyi zvakare.
Nyamavhuvhu 1939. Ngarava hombe yegungwa inonzi Valkirie inoita kunge iri muAtlantic Ocean. Ngarava yekare yekufambisa inoiwana nemukana uye ndokuikwevera kuchiteshi, mushure mekuona kuti kwasara mwana ane mwedzi mishoma ... uye chimwe chinhu chisina anokwanisa kuzivikanwa.
Chakavanzika icho, Makore makumi manomwe gare gare, inoramba ichikanganisa vazhinji, kusvika padanho rekuti muzvinabhizinesi afunga kudzosa ngarava kuupenyu kuti atevedze nzira imwechete yaakaita kare achitsvaga mhinduro kune zvakaitika. Uye zvechokwadi, avo vari muchikepe vanofanirwa kuve vakangwara zvakakwana kudzivirira izvo zvakafanana kuti zviitike zvakare.
Hupenyu hwaCassandra hunenge hwakakwana kusvika zuva raanotambura tsaona isingazivikanwe yemumugwagwa inomusiya ave pakoma. Mushure memavhiki mashoma, uye mushure mekupora kunoshamisa, Cassandra anoona kuti nyika yake yese yachinja zvachose: mumwe munhu atanga kuteedzera imba yake uye mhuri uye anotamburawo nemhedzisiro inokanganisa yaasingakwanise kudzora.
Iyo protagonist kwete chete iye mukadzi anonzwa kuti haakwanise kudzora hupenyu hwake, Asi, "kushungurudzwa" uku kwakazara nemhirizhonga, humhondi uye kutsvakwa neruramisiro zvinoreva kuti haazive zviri kuitika. Ive nekuchenjerera, kunyangwe ichitaridzika kunge inonakidza, iri chaizvo yakakamurwa seinotyisa (isu hatizokuudze iwe nei).
Pano Manel Loureiro anotsvaga kuita kuti muverengi apinde mugakava nezve izvo zvaungade kuzvipira kuchengetedza vadiwa vako.
Panguva iyoyo, hapana aiziva zvaiitika. Kunze kwekuti chikamu chikuru chevanhu chakazviuraya mukati memazuva mashoma. Pakati pevakapona ndiAndrea, musikana ane makore gumi nemanomwe ekuberekwa, nherera uye aine bundu rakakura mundangariro dzake. Kubva mazuva iwayo, aingorangarira kumanikidzwa kwake kupinda mutiraki yemauto izere nevanhu vanotya vachitiza kutyisidzira kumwe chete.
Una apocalyptic nyaya umo vatambi vanochengeta zvakavanzika, kunyangwe ivo pachavo vasingazvizive. Kunyangwe bhuku iri richitanga seizvi, chokwadi ndechekuti Manel Loureiro anozopinda mune ramangwana riri kure, iyo nyika yashanduka uye vakapona nevazukuru vanoedza kudzokera ku "hunhu" mukati mematongo ezvaimbove hunhu . Asi ndipo kana izvo zvakambopera nzanga iyi inoonekazve.
Musuwo, unonakidza kwazvo Manel Loureiro
Tsika yematsotsi. Mukadzi akatsvaga kuponesa mwanakomana wake. Manel Loureiro anoshamisika neanonakidza seti mune isinganzwisisike uye ine mukurumbira Galicia.
Saka iwe unogona kupfupisa zvauri kuzowana mune ino inonakidza. Ndizvo yakaiswa muGalicia uye mairi uchave nemupurisa, Raquel Colina, achangosvika munyika ino achitsvaga mushonga wemwanakomana wake. Nekudaro, anomhanyira mukuponda uye nekutsakatika zvinoita kunge kune hukama. Nekudaro, mukuferefeta kwako kwese, haufanire chete kugadzirisa nyaya yacho, asi nekuedza kuponesa hupenyu hwemwanakomana wako.
Iwe unotsunga kuverenga chero ripi zvaro remabasa ake?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Manuel Loureiro
Bhuku reKadin akateedzana, anozivikanwa seMukadzi kana Simba reMukadzi